Intel yakaratidza zvigadzirwa zvayo zvitsva zve5G network | Linux Vakapindwa muropa
Intel yakaratidza zvigadzirwa zvayo zvitsva zve5G network
Intel irikuita zvese zvinogoneka kuve kumberi kwekutumirwa kwe5G network uye ndizvo yaburitsa nhasi, Hardware nyowani uye software, included yayo yekutanga gumi nanometer system pane chip yeasina waya base station. Iyo nyowani Intel Atom P5900 processor ndiyo SoC yekutanga yekambani yakagadzirirwa zviteshi zvisina waya zvisina waya izvo zvinogamuchira uye zvinofambisa nhepfenyuro dzinoshanda senzvimbo yemagetsi enzvimbo isina waya.
Nyanzvi dzinoti zviteshi zvisina waya ndiwo akakosha ekutanga kuita chinangwa chevanopa 5Gsezvo zvichange zvakakosha kuti ikwanise kukurumidza isina waya netiweki.
Ndicho chikonzero Intel iri kuita napose painogona kutonga pamusika neAtom P5900, iyo yakagadzirirwa kupa yakakwira bandwidth uye yakaderera latency.
Pamusangano wevatori venhau, Dan Rodríguez, Corporate Mutevedzeri weMutungamiri uye General Manager weIntel's Network Platforms Group, vakati vanobatana vanosanganisira Telefonaktiebolaget LM Ericsson neZTE Corp vachatanga kuburitsa Atom P5900 gore rino.
Pakupedzisira yakati, kambani iri kuda kuzvisimbisa semutungamiri wemusika muzviteshi zvisina waya zvisina waya na2021.
Pamwe pamwe neAtomu nyowani P5900, Iyo kambani zvakare yakaburitsa chizvarwa chitsva cheIntel Xeon Scalable processor ku kushandiswa kwayo mukushandisa kwenetiweki 5G.
Uno yeshanduko dzinonyanya kuzivikanwa ine 5G network ndeyekuti yakawanda yakawanda data ichagadziriswa kumucheto kwenetiweki, uko yakaderera latency inoshandura kune inokurumidza ruzivo uye yakawanda kukosha kwebhizinesi.
"5G inzvimbo huru yekukwezva, kutyaira data uye nemasevhisi anotyairwa nedhata," akadaro Rodríguez.
Intel yakati chizvarwa chitsva chechipiri Intel Xeon Scalable processors chakanakira irwu rudzi rwebasa, se ipa avhareji ye42% mamwe maitiro pamadhora pane ayo epakutanga chizvarwa machipisi.
"Iyi ndiyo Xeon inokurumidza kupfuura dzose," akadaro Lisa Spelman, mutevedzeri mutevedzeri wemutungamiri uye maneja mukuru weIntel's Xeon processor uye data centre kushambadzira.
Spelman akati wechipiri-chizvarwa Intel Xeon scalable processor zvakare inokodzera yekuchenjera yekuita basa kutema, kubvira inosanganisa Yakadzika Kudzidza Boost tekinoroji kubva kukambani inobatsira kuendesa kusvika katanhatu mashandiro emakwikwi eCUU mapuratifomu.
Ma processor aya akatotumirwa nevatengi vanosanganisira Amazon Web Services Inc, Microsoft Corp neAlibaba pamapuratifomu avo eruzhinji, akadaro.
Nekugara neAI, Intel yakaunzawo dunhu nyowani yakarongedzwa kunyorera chaiko, kana ASIC, iyo inogona kuve yakagadzirirwa kune mamwe mabasa ebasa.
Yakarongeka ASICs ndeimwe nzira kumunda unogadzirirwa gedhi arrays, ayo ari mahedheni ekuchinjisa ayo anogona kugadzirwazve pane nhunzi kune akasiyana mabasa. ASICs yakangoita seyakagadziriswa, asi inogona kungorongedzwa kamwe chete. Kunyangwe zvakadaro, ivo vanonyanya kushanda uye zvirinani zvirinani kune yakakwira-vhoriyamu kugadzirwa kwemazhinji.
Intel yakapedza yayo 5G networking portfolio pamwe nekumisikidzwa kwayo nyowani Ethernet network adapta 700 nhevedzano inouya ne "Hardware-yakakwidziridzwa nemazvo nguva protocol". Rodríguez akataura kuti chikamu chekupedzisira ichi chinopa mukana wekuchengetedza nguva chaiyo pamataneti ese, izvo zvakakosha kubvisa latency mumabasa emari, kutepfenyura kwevhidhiyo uye nekukurumidza mabasa.
Intel akati iyo adapta inowedzera iyo nguva chaiyo inodiwa kune maNetwork e5G kuburikidza nekubatanidzwa kwehardware uye zvigadzirwa zve software. Ikozvino iri kutora masampula uye ichaenda mukugadzirwa mukota yechipiri.
Pakupedzisira, Intel yakati iri kuwedzera iyo Open Network Edge Services software toolkit. OpenNESS ndeye yakavhurwa sosi rejista yekushandisa iyo inogonesa iyo ecosystem kugadzira uye kuendesa matsva ekushandisa maficha uye masevhisi.
Kubva nhasi, ikozvino inotsigira yakazvimirira deployments ye5GNR uye Enhanced Platform Kuzivisa kana EPA, iyo inofanirwa kubatsira vatengi kushandisa kumucheto-based microservices nyore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Intel yakaratidza zvigadzirwa zvayo zvitsva zve5G network
IEuropean Commission inobhejera paSignal sekutumira mameseji kune vashandi vayo
Google Lighthouse inouya kuFirefox seye browser yekuwedzera